Kenya mechiri oge ọ ga-eji na-alọta COVID-19 ruo mgbede
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya » Kenya mechiri oge ọ ga-eji na-alọta COVID-19 ruo mgbede
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Kenya mechiri oge ọ ga-eji na-alọta COVID-19 ruo mgbede.
Kenyatta kwuru, "Anyị apụtabeghị n'ọhịa, yabụ na anyị ga-aga n'ihu na-ahụ ihe mgbochi… iji kwado uru anyị na-enweta ma na-ekwe nkwa ịmaliteghachi akụ na ụba anyị."
Oge mgbochi abalị coronavirus na Kenya na mba niile, na-arụ ọrụ kemgbe Machị 2020, kwụsịrị.
Onye isi ala Kenya Uhuru Kenyatta kwupụtara mbuli ngwa ngwa nke oge mgbochi COVID-19 nke mba ahụ.
Kenya, nke nwere onu ogugu nde 54, ekwuputala ikpe 252,199 nke COVID-19 na 5,233 nwụrụ, dị ka ọnụ ọgụgụ gọọmentị ọhụrụ si dị.
Onye isi ala Kenya Uhuru Kenyatta kwupụtara na mba ahụ na-alọta abalị na mgbede ruo n'ụtụtụ ebidola kemgbe Machị 2020 iji belata mgbasa nke nje COVID-19, ebuliri ya.
Onye isi ala kwupụtara mkpebi gọọmentị ibuli ọkwa ahụ oge o ji alọta taa ị cheụrị ọ andụ na ịkụ aka n'otu mmemme iji mee ncheta ụbọchị Mashujaa, bụ ezumike ọha iji kwanyere ndị nyere aka na mgba nnwere onwe obodo ahụ ùgwù.
Dabere na Onye isi ala Kenyatta, ọnụ ọgụgụ ọrịa COVID-19 belatara, na-erughị pasent 5 nke ule kwa ụbọchị na-egosi na ọ dị mma.
Kenya, nke nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ nde 54, ekwupụtala ikpe 252,199 nke COVID-19 na 5,233 nwụrụ mana ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ka dị ala, yana naanị pasent 4.6 nke ndị toro eto gbachapụrụ agbachapụ, dịka data gọọmentị ọhụrụ siri dị.
Onye isi ala Kenyatta kwuru na ọgbakọ na-aga ụka na ụlọ ụka okpukpe ndị ọzọ nwere ike ịbawanye ụzọ abụọ n'ụzọ atọ, site na nke atọ na mbụ, n'agbanyeghị na onye ọ bụla kwesịrị ka na-agbaso iwu ndị ọzọ, dị ka ikpuchi ihu.
Onye isi ala ahụ gwakwara ndị ọrụ gọọmentị ka ha hụ na osisi zuru oke ma mechaa maka ọgwụ mgbochi COVID-19 malitere ịrụ ọrụ Kenya site n'ọnwa Eprel n'afọ ọzọ.
October 21, 2021 na 01: 29